နိုင်တဲ့အထိ ဒီတိုက်ပွဲကို ဆက်တိုက်မှာပဲ – HI Burma
Home	ဆောင်းပါး	နိုင်တဲ့အထိ ဒီတိုက်ပွဲကို ဆက်တိုက်မှာပဲ
“ တို့ပြည်သူတွေ ညီရဲ့လားဟေ့ …. ညီတယ်ဟေ့ ညီတယ်ဟေ့ ၊ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး …. ဒို့အရေး ဒို့အရေး ၊ ဖမ်းဆီးထား သော ခေါင်းဆောင်များ …. ချက်ချင်းလွှတ် ချက်ချင်းလွှတ် ၊ စစ်အာဏာရှင် …. အလိုမရှိ အလိုမရှိ ”
အမျိုးသမီးငယ်လေးတစ်ဦးဟာ လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတဲ့ hand speaker ကို နှုတ်ခမ်းနားတေ့ပြီး အထက်ပါကြွေးကြော် သံတွေကို အားမာန်အပြည့်နဲ့ ဟစ်ကြွေးနေပါတယ်။
သူကတော့ အသက်က ၂၁ နှစ်အရွယ် မချိုဇင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ အရောင်းတာဝန်ခံလုပ်နေတဲ့ သူက နွေဦးတော်လှန်ရေးလို့ဆိုတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမှာ လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ တက်ကြွစွာ ပါဝင်နေတာ ပါ။
“ ညီမကတော့လုံးဝမရှုံးမပေးဘူး။ သူတို့ကိုရသလောက် ပြန်ဆန္ဒပြမှာပဲ။ သူတို့သာအာဏာမသိမ်းခဲ့ရင် ဒီလိုတွေက ဖြစ် လာစရာကို အကြောင်းမရှိတာလေ ” လို့သူက ဆိုပါတယ်။
“ မတ်လ၁ရက်နေ့က မွေးနေ့လေ၊ မွေးနေ့ကို အင်းစိန်ထောင်ထဲရှိနေရမယ်လို့ အိပ်မက်တောင်မမက်ဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့် တကယ်ဖြစ်လာတော့လည်း အရမ်းတော့ဝမ်းမနည်းပါဘူး” လို့ သူက ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ဆိုတယ်။
မချိုဇင်က ယခင်က ဘယ်အရေးကိစ္စကိုမှ စိတ်မဝင်စားခဲ့ဖူးပေမယ့် တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဒီအာဏာရှင်ကို တော်လှန် ရေးကိစ္စမှာတော့ တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ အမျိုးသမီး လူငယ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်၊ မိသားစုအပေါ် တစ်ဖက် တစ်လမ်းက ကူပေးနေတဲ့ သူ့အတွက် အခုချိန်မှာတော့ မိသားစုထက် နိုင်ငံ့အရေးက ပိုအရေးပါနေတာပါ။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့မှာ စစ်တပ်က နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အပါအဝင် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် တွေ၊ ရွေးကောက်ခံပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ ပရဟိတလှုပ်ရှားသူတွေအများအပြားကို မတရားဖမ်း ဆီးပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကို အဓမ္မရယူခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် စစ်အာဏာရှင် အဓမ္မသိမ်းယူခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့အာဏာကို ပြည်သူတွေဆီပြန်ရောက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့အထဲ ဂျန်ဇီလို့ ခေါ်ကြတဲ့ အသက် ၂၀ ဝန်းကျင် လူငယ်မျိုးဆက်တွေက ဦးဆောင်နေကြပြီး နိုင်ငံအနှံ့က ပြည်သူတွေကလည်း ထောက်ခံ ပါဝင်နေကြတာပါ။
ဒီထဲမှာ အမျိုးသမီး အသက်အရွယ်ပေါင်းစုံဟာ ကျရာကဏ္ဍကနေပြီးတော့ စစ်အာဏာရှင်ကို တိုက်ဖျက်ဖို့ ရဲရင့်စွာ ပါဝင် နေကြပါတယ်။
ဆန့်ကျင်တော်လှန်မှုတွေကိုလည်း စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့တွေက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့ကြပြီး လူသေဆုံးမှု တွေ ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေနဲ့ အဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ပြည်သူတွေများစွာရှိနေပါပြီ။ အခုရက်ပေါင်း ၄၀ ကျော်လာချိန်မှာတော့ တော် လှန်ရေးအတွင်း ကျဆုံးသွားခဲ့သူ နှစ်ရာကျော်သွားခဲ့ပါပြီ။
အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း လူထုသပိတ်ကို မန္တလေးက စတင်ခဲ့ပေမယ့် ရက်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ကြာပြီးချိန်မှာတော့ ရန် ကုန်ဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ သေနတ်ပြောင်းလှည့်ရာ အဓိကနေရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေဟာ အလုံ၊ စမ်း ချောင်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်တစ်ဝိုက်၊ မြောက်ဥက္ကလာ၊ တောင်ဥက္ကလာ၊ မြောက်ဒဂုံ၊ တောင်ဒဂုံ၊ လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာ၊ မရမ်းကုန်း၊ အင်းစိန်၊ သာကေတ၊ ဒေါပုံ စတဲ့မြို့နယ်တွေကို စစ်အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်း နှိမ်နင်းတာမျိုးတွေ ဆက်တိုက်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါတယ်။
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှာ နေထိုင်ပြီး မြို့နယ်ကထွက်တဲ့သပိတ်စစ်ကြောင်းမှာ အမြဲပူးပေါင်းပါဝင်လေ့ရှိတဲ့ အသက် ၃၀ အရွယ် မငုဝါလှိုင်က “ လူတွေကိုသတ်ပြလို့ ကျွန်မတို့ကကြောက်နေမယ်။ အဖမ်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကို လိင်စော်ကားမှုတွေ လုပ်လို့ ကြောက်ရမယ်စသဖြင့် အနည်းဆုံးဆန္ဒပြနေရင်တောင် ကာကွယ်ရေးလိုင်းမှာ မိန်းကလေးတွေပါလာရင် နောက် မှာနေဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့။ ကျွန်မတို့က ဒီအကြောင်းကိစ္စတွေကို သိပြီးသား။ ကြောက်လားလို့မေးရင်ကြောက်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကြောက်လို့ ပြီးသွားမယ့်ဟာမဟုတ်ဘူး။ ဒီအတွက် ကျွန်မစွမ်းသလောက်တိုက်ခိုက်တယ် ” လို့ ဆိုပါတယ်။
သူက ကလေးနှစ်ယောက် မိခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို အမှောင်ခေတ်မှာ မကြီးပြင်းစေချင်သလို ကိုယ်တိုင် လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ်ကို မျှော်လင့်ပြီး ကြိုးစားနေသူမို့ အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ စက္ကန့်ပိုင်းတောင် မနေ လိုဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေစာရင်းအရ အမျိုးသမီးဦးရေဟာ အမျိုးသားဦးရေထက် ပိုပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ တော်လှန်ရေးမှာ နေရာ ပေါင်းစုံကနေ ပါဝင်နေကြသူတွေထဲမှာလည်း အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် မကျော်ရင်သာနေရမယ် မလျော့ ပါဘူး။ တော်လှန်ရေးမှာ ပထမဦးဆုံး အသက်ပေးသွားခဲ့ရသူဟာလည်း အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မမြသွဲ့သွဲ့ခိုင်ပါ။
အငြိမ်းချမ်းဆုံးတော်လှန်နည်းလို့ ယူဆထားတဲ့ CDM လုပ်သူတွေထဲမှာကြည့်ရင်လည်း အမျိုးသမီးတွေအများစုရှိတဲ့ ပညာ ရေး၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေဟာ ရာနူန်းပြည့်နီးပါး အောင်မြင်တဲ့ဌာနတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလို CDMလုပ်တဲ့သူတွေကိုပြောရရင် အစိုးရဌာနတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဝင်ငွေလည်ပတ်စီးဆင်းမှုတွေ အ တွက် အားကိုးအားထားရာ ဘဏ်တွေလည်း ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
မတ်လလယ်မှာ ဝန်ထမ်းတွေကို ဖိအားပေးရုံးတက်ခိုင်းတဲ့ ဘဏ်တစ်ချို့ရှိနေပေမယ့် ဘဏ်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးအများစု ကတော့ CDM ဆက်လုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ သူတို့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာ ရေးသားထားကြပါတယ်။
“ ကျွန်မတို့က ဘဏ်ဝန်ထမ်းဆိုတော့ ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းထဲမှာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ဘာလို့ CDM လုပ်လဲ အလုပ် မလုပ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူး။ CDM လုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ နိုင်ငံကိုလည်ပတ်နေတဲ့ ယန္တရားတွေရပ်သွားဖို့။ ဒါဆိုရင် ငွေကြေးလည်ပတ်မှုကိုပါရပ်ပစ်မှရမယ်။ ဒါကြောင့် CDMလုပ်တယ်။ တစ်ခြားသော နိုင်ငံတော်ကို တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ပေး ရာရောက်တဲ့ သွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေပါ CDMလုပ်သင့်တယ် ” လို့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ KBZ ဘဏ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမှာ လမ်းပေါ်ထွက်တိုက်ခိုက်တာ၊ CDM လုပ်တာမျိုးတွေရှိသလို အခြားသောပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ တွန်းလှန်မှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ Gen-Xလို့ခေါ်ကြတဲ့ သက်လတ် ပိုင်းအများစုကတော့ တော်လှန်ရေးထဲမှာ နောက်ကွယ်ကနေ ပံ့ပိုးပါဝင်နေကြပါတယ်။
ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မှာနေထိုင်တဲ့ ဒေါ်ငြိမ်းအေးက “ ကိုယ်တိုင်ကကျ ရောဂါနဲ့ပြေးဆိုရင်လည်း မပြေးနိုင်ဘူး။ အလုပ် ကလည်း ခေတ်မကောင်းတော့ရပ်ထားတာကြာပြီ။ ဒီတော့ ကျွန်မလုပ်ပေးနိုင်တာ ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ ကလေးတွေစားဖို့ သောက်ဖို့ ချက်ပြုပြင်ဆင်ပေးတာပဲပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့အားမရဘူး။ အပြင်ထွက်နေကြတဲ့ ကိုယ်နဲ့ရွယ်တူတွေ မြင်ရင် သိမ်ငယ်သလိုပဲ ခံစားရတယ် ” လို့ သူ့ခံစားချက်ကို ပြောပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုတဲ့ ၁၀ နှစ်တာကာလမှာ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေနဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေး ရနိုင်ခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ မီးဖိုချောင်ထဲမှာပဲ ကုန်ဆုံးနေရတဲ့ အခြေအနေကနေ လူ့အဖွဲ့အစည်း မှာ ဦးဆောင်ပါဝင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေအထိ ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ ပိုပြီးကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။
သို့သော်လည်းအခုတော်လှန်ရေးမှာတော့ အမျိုးသမီးတွေဖြစ်လို့ဆိုတဲ့ စကားလုံးနောက်မှာ ပုန်းမနေခဲ့ကြပါဘူး။ ငါတို့ဟာအားနွဲ့သူတွေ၊ ငါတို့ကိုပဲ ကာကွယ်ပေးကြလို့ တောင်းဆိုနေခြင်းတွေ မရှိပါဘူး။ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေနဲ့တန်းတူ တော်လှန် တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပါ။
မချိုဇင်ဆိုရင် သူနေထိုင်ရာမြို့နယ်က သပိတ်စစ်ကြောင်းမှာ နေ့စဉ်လိုလို ပါဝင်ပူးပေါင်းဆန္ဒပြနေပါတယ်။ သူနား တဲ့ရက် ဆိုလို့ ခြေထောက်ထောက်မရအောင်နာတဲ့အတွက်နှစ်ရက် ၊ အဖမ်းခံရလို့ အင်းစိန်ထောင်ထဲ နေခဲ့ရတဲ့သုံးရက်နဲ့ ထောင် က လွတ်လွတ်ချင်း အိမ်ကမလွှတ်တာကနှစ်ရက် စုစုပေါင်း ခုနစ်ရက်သာရှိသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒီရက်တွေကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာ အင်တိုက်အားတိုက်နဲ့ အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကာ အဆုံးသတ်တိုက် ပွဲအထိ ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ ယခုလိုဆိုပါတယ်။
“ ညီမတို့လိုမိန်းကလေးတွေရော အန်တီတွေရောအများကြီးပဲ။ လမ်းပေါ်မှာနေ့တိုင်း ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့ဆန္ဒပြနေတာ ပင်ပန်း တာပေါ့၊ နေပူကြီးထဲ ။ ဒီကြားထဲ ပြေးရလွှားရနဲ့ ။ ဒါပေမယ့် နိုင်တဲ့အထိဒီတိုက်ပွဲကို ဆက်တိုက်မှာပဲ ”